Iindaba -I-BXL yoyilo lweWon 4 yokuPakisha iiMbasa zoyilo kolu khuphiswano lweMobius Advertising
I-BXL ye-Creative Won 4 yokuPakisha amaBhaso okuKhuphisana kuKhuphiswano lweeMbasa zeMobius
I-Shu Uemura limited Pac Isipho ...
Intaka yokwenene elungele ukutya-ukutya ...
Wu Guang Shi Se eyongezelelweyo virgi ...
Iseti yoKhathalelo lolusu
Amakhandlela amane anevumba elimnandi
Uhambo lweQingyan · Seta uhambo
UKingfisher Lipstick Clutch
Isicatshulwa seYuyan Bamboo
I-BXL Creative iphumelele i-"Best Works Award" kunye ne "Gold" ezintathu zokupakisha kuyilo kukhuphiswano lweeMbasa zeMobius ze-2018, ebeka irekhodi elifanelekileyo kwiminyaka engama-20 e-China. Ikwayiloo shishini liphumeleleyo kuphela eAsia.
Umbono woyilo olu luvela kwizakhiwo ezinxulumene nobomi. Ngaphandle kokupakisha kubonise ubume besakhiwo ngamanqaku amabini. Okokuqala, uHuanghe Lou unempawu ezizodwa. Okwesibini, kukho intetho yamaTshayina ethi "Ubomi bufana nokunyuka kwezinyuko zesakhiwo". Umgangatho owahlukileyo unembono eyahlukileyo. Abaqulunqi bayayaphula indibano kwaye benze iisimboli ezibonakalayo ezibonakalayo endaweni yokuzibandakanya kwiinkcukacha. Olu luyilo lulula kodwa alulula kwaye luyabukeka kwaye luyimimangaliso ngezinto zakudala. Igama lalo brand linika abathengi intelekelelo entle.
Kude kube namhlanje, siphumelele i-73 iyonke yamabhaso oyilo lwamanye amazwe. Kusithathe ixesha elide ukuma kwiqonga lamanye amazwe. Njengokuba iChina isiya isiya isomelela ngakumbi, imakethi yaseTshayina iya isiba ngokubaluleka nangakumbi kwimveliso engaphaya kolwandle, izinto zenkcubeko zaseTshayina zamkelwe kwaye ziyathandwa ngabantu abaninzi emhlabeni. Ngenjongo yokuzisa iinkcubeko zaseTshayina kwinqanaba loyilo lwehlabathi, iBXL Creative kwaye iya kuhlala isendleleni.
Ixesha lokuposa: Aug-20-2020
Egqithileyo Ukulwa neCovid-19, iBXL yoyilo iyasebenza!
Okulandelayo: I-BXL yokuPakisha okuYilayo kweGuizhou Factory ityikitywe ngokusemthethweni!